Trump oo la sheegay in uu damacsanyahay in uu cafis madaxweyne isku fidiyo - BBC News Somali
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa ku nuuxnuuxsaday inuu leehay "awood buuxda" oo madaxweyne oo uu saamaxaad ugu fidin karo dadka.
Hadalkan madaxweynuhu wuxu ku soo beegmay iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in uu damacsanyahay inuu cafis madaxweyne u fidiyo xubnaha qoyskiisa, kaaliyeyaasha iyo qudhiisaba hadii baadhitaanka gaarka ah ee socdaa ku helo dambi ah inuu gacan saar qarsoodi ah la lahaa Ruushka intii lagu jiray ololihii doorashada.
Af-hayeen u hadlay xisbiga Dimuqraadiga ah ayaa ku tilmaamay wararkaa soo baxay kuwo "walaac qoto dheer" abuuraya.
Maamulka Maraykanka ayaa baadhaya suurtogalnimada ah in kooxdii ololaha Trump iyo Ruushku lahaayeen gacan saar qarsoodi ah, laamaha sirdoonkuna waxay qabaan in Ruushku isku dayey inuu ka caawiyo Trump sidii uu talada dalka u qaban lahaa.
Ruushku wuu beeniyey arintan, madaxweyne Trump na wuxu sheegay in aanay jirin wax gacan saar ah oo qarsoodi ahi.
Wargeyska Washington Post ayaa Khamiistii ku waramay in Trump iyo kooxdiisu ay ka arinsanayeen sidii uu madaxweynuhu cafis ugu fidin lahaa dadka isaga ku dhow dhow.
Madaxweynuhu wuxu awood u leeyahay inuu cafis u fidiyo dadka la tuhunsanyahay inta aan dambi lagu helin ka hor, ee aan dambigaa weli maxkamad lagu hor geynin.
Senator Mark Warner oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, kana mid ah gudida sirdoonka ee Senate-ka ayaa ku tilmaamay wararkan soo baxay kuwo "walaac qoto dheer" abuuraya waxaanu yidhi "in la cafiyo qof kasta oo laga yaabo inuu arintan la baadhayo ku lug lahaa waxay noqon doonaa in laga tallaabay meel ma dhaafaan ah".
Sabtidii ayaa Trump wuxuu boggiisa Twitter-ka ku qoray "mar hadii la isku waafaqsanyahay in madaxweynaha Maraykanu awood u leeyahay in uu cafis fidiyo, maxaa keenay in marka dambiga la sheegayaa ilaa haatan yahay war aan si rasmi ah u soo bixin in la yidhaa madaxweynahaa cafis fidinaya. War beena dheh!".